စာနယ်ဇင်း TJS-45 နေမှုကိုချေဖျက်ကို C အမျိုးအစားမြင့်မားသောတိ - စာနယ်ဇင်း TJS-45 ပေးသွင်းနေမှုကိုချေဖျက်တရုတ်ကို C အမျိုးအစားမြင့်မားသောတိ, စက်ရုံ -TJS
မြန်နှုန်းပြည်မအတွက် SPM 1200 ရောက်ရှိနိုင်သည့်ပထမဦးဆုံးအာဏာကိုစာနယ်ဇင်း
ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ဦးဆောင်ပြီးရပ်တည်ချက်, terminal ကို, တိကျစွာမိုဘိုင်းဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလျှပ်စစ် connectors အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ပုံမှန်က C-frame ကိုပုံစံဒီဇိုင်း "ဟ" ဖို့ဒါမှမဟုတ်အရွယ်အစားတန်ချိန်နှင့်အိပ်ရာတိုးအရွယ်အစားအဖြစ်နေမှုကိုအာရုံလွှဲစက်များအတွက်စိတ်သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ Taijishan rigidly ပဲ့ထိန်းကို C-frame ကိုဒီဇိုင်းများ gib-guided သိုးထီးတကောင်ကိုအားကောင်းသုံးပြီး deflecton နဲသို့မဟုတ် "ဟ" ကိုတှနျးလှနျအင်ဂျင်နီယာနေကြသည်ဖို့မွေးရာပါသို့မဟုတ် တိကျဖိုက်ကြေးဝါဘုရ်ှ impregnated ။
2.Lubrication system ကို: အလိုအလျှောက်ပိတ်ချောဆီအရည်ကြည်နှင့်အတူအထူးဖွဲ့စည်းပုံ, အထူးစက်မှုဇုန်ဒီဇိုင်းသူတွေကိုအဓိကအလောင်းတွေမြန်ပြီးပိုသဘာဝအလျောက်အအေးရနိုင်အောင်။
မြန်နှုန်းမြင့်စစ်ဆင်ရေးနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအသုံးဝင်သောအသက်ကိုစောင့်ဖို့ပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲနေသောမျှမျှတတကိရိယာနှင့်အတူ 3.Equipped ။
4.Computer ထိန်းချုပ်မှုစနစ်က: display ကိုအလုပ်လုပ်အခြေအနေနှင့်အမှားထိပ်တန်းသေပြီစင်တာထိန်းချုပ်မှုကိုအလွယ်တကူအမှားဖယ်ရှားပစ်ရန် ..
5.Air ဖိအားစနစ်က: system ကိုတည်ငြိမ်အောင်စံအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူသုံးပါ။
လုံခြုံတည်ငြိမ်ရေးနှင့်တိကျစွာဖြစ် 6.Adjustment မှိုစစ်ဆင်ရေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်, သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို။
ဌာနမှူးလွှဲပြောင်းယန္တရားဖို့အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စောင်ရေ system ကိုအအေးခံအင်အားစုနှင့်အတူ 8.Use ဤအတောအတွင်းအသုံးဝင်သောအသက်ကိုစောင့်။
ဦးတည်ချက် device ကိုပိုပြီးတိကျဖွစျဖို့အတှကျတည်နေရာဦးတည်ချက်နှင့်အတူ 9.Equipped, လွယ်ကူသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ပြုပြင်။ မော်ဒယ်
အားကောင်း: 860x450x100mm / 720x450x100mm
slide ညှိနှိုင်းမှု: 30mm
မြန်နှုန်း controller ကို: အင်ဗာတာ
clutch နှင့်ဘရိတ်: လေထု & ပွတ်တိုက်မှု
shipping: Worldwide မှဝန်ဆောင်မှု
TJS ဝန်ဆောင်မှုလယ်ပြင်၌အကြှနျုပျတို့၏အားသာချက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ထဲကအများစုဟာပိုပြီး5နှစ်ပေါင်းထက်ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၌ နေ. ကြပြီးနောက်-ရောင်းအား။ နိုင်ငံခြားစျေးကွက်များအတွက်ဗီယက်နမ်စသည်တို့ကို, ပြည်မကြီးနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းအသစ်ကဒေလီ, အိန္ဒိယမှာ set up န်ဆောင်မှုအရှိဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး အမျိုးမျိုးသောလျှပ်စစ်နှင့် machnical မေးခွန်းများကိုအတွက်လုံလောက်အောင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
2.We သင်အကောင်းဆုံးရေကြောင်းအေဂျင်စီ Providence
3.We သငျသညျအစာရှောငျပေးပို့ Providence
4.We သင်အကောင်းဆုံး service provider
5.We သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘို့သင့်ကို OEM Providence
1 ။ TJSH-30T များအတွက်အဓိကလျှောက်လွှာကဘာလဲ?
TJSH-30T ကျယ်ပြန့်လျှပ်စစ် contactor, terminal ကို, I / O contactor, မိုဘိုင်းဖုန်း shidled ဖုံးစတာတွေနဲ့တူအဖိုးတန်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်အသုံးပြုသည်
2 ။ TJSH-30T ၏တိကျမှန်ကန်မှုကဘာလဲ?
လူပျို Crank က C-frame ကို High-Speed ​​ကိုသတ္တုတံဆိပ်ထုစာနယ်ဇင်း TJS-80
နှစ်ချက်ပွိုင့်ကို C-frame ကို Precision တံဆိပ်ထုသည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းစာနယ်ဇင်း
H ကို Frame က Single-Point သို့ high-speed Precise လာကြတယ်စာနယ်ဇင်း TJSH-30T